‘रातो टीका निधारमा’ आजबाट, के दर्शकले रुचाउलान त साम्राज्ञीको गाउँले रूप?
पाेखरा १० असाेज- फ्राईडे रिलिज अन्तर्गत आज अर्थात् शुक्रवारदेखि चलचित्र ‘रातो टीका निधार’ मा प्रदर्शनमा आएको छ। अशोक शर्माको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको यस चलचित्रले दर्शकको मन जित्नेमा निर्माण टिम विश्वस्त रहेको छ।
नेपाली चलचित्रमा साम्राज्ञी र अंकितका अलावा वसुन्धरा भुसाल, नीता ढुंगाना, खुश्वु खड्का, कलाकार बुद्धि तामाङलगायत कलाकारहरूको प्रमुख भूमिका रहेको छ।
बैदेशिक रोजगारीको कथा भन्ने यस चलचित्रमा साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह र अंकित शर्मा मुख्य भूमिकामा रहेका छन। कुनै बेला गाउँले भूमिकामा चलचित्र नगर्ने भनेर आलोचना खेपेकी साम्राज्ञी स्वयं यस चलचित्रमा गाउँले भूमिकामा देखिएकाले पनि दर्शकका लागि उनको काम र चलचित्र फरक हुन सक्छ।
एकै परिवारका ११ जनाले एक आपसमा गरे २३ पटक बिवाह ! कारण यस्तो
एजेन्सी , चीनमा बिवाह र सम्बन्ध बिच्छेदलाई लिएर अचाम्मको खबर बाहिरिएको छ। यहाको एकै परिवारका ११ जनाले सरकारी योजना उपयोग गर्ने लालचमा एक आपसमा २३ पटक बिवाह गरेका छन। तर बिवाह गरेको १ हप्ताभित्र नै यिनीहरुले आपसमा सम्बन्ध बिच्छेद समेत गरेका छन। यसको सुरुवात झेजियांग प्रांतको लिशुई शहरको सानो गाउँमा बस्ने पैन नामक व्यक्तिले गरेका हुन।
सरकारले स्थानीयवासीका लागि कम्तिमा पनि ४० वर्गकिलोमिटर अपार्टमेंट दिने योजना थाहा पाएपछि उनले यो सब गरेका हुन्। पैनले यस सरकारी योजनाबाट लाभ उठाउनका लागि बिवाह गर्ने योजना बनाई डिभोर्स भईसकेकी पुर्व पत्नीसँग बिवाह गरेका हुन्। योजना अनुरुप सरकारले भनेकाे अपार्टमेन्ट आफुले पाएपछि उनले पुन श्रीमतीसंग सम्बन्ध बिच्छेद गराएका हुन्। यहासम्म कि उनले अपार्टमेन्ट पाउने लोभमा आफ्नै साली र बहिनिसंग पनि बिवाह गरेका थिए।
पिपुल्स डेल्लीका अनुसार उनको यस काममा उनका नजिकका आफन्तहरु पनि संलग्न थिए त्यति मात्र नभई उनका आमा बाबुले पनि पुन बिवाह गरेका हुन। पैनले धोकाले सबैसंग बिवाह गर्दै डिभोर्ड दिएको खबर सरकारी अधिकारीले थाहा पाई उनलाई प*क्राउ गरेको छ। हाल प्रहरीले ४ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्दै छ भने अन्य ७ जनालाई जमानतमा रिहा गरेको छ।